मिठो आलु, थाइम र महको साथ पोष्ट कुखुरा | बेजिया
मिठो आलु, थाइम र महको साथ पोष्ट भुसुना
घरमा पाहुनाहरू राख्दा रोटिसेरी कुखुरा सुरक्षित विकल्प हो। र यसलाई दोहोर्याउने कुनै कारण छैन, मौसमको विशिष्ट गार्निशहरू प्रत्येक पटक यसलाई छुवाउनको लागि समाहित गर्न सकिन्छ। पूर्व भुटेको कुखुराको मीठो आलुको साथ थाइम र मह, उदाहरणका लागि, यसको र and्ग र यसको स्वाद दुबैको लागि यस समयमा आदर्श हो।
मिठाई आलु एक शरद ingredतु घटक हो। एउटा घटक जुन हामी आलुको ठाउँमा वा यसको साथ संयोजनमा प्रयोग गर्न सक्दछौं, जसले धेरै र color र एक प्रदान गर्दछ अनौंठो मीठो स्पर्श हाम्रो प्लेटहरूमा। एक मिठास जुन यस विधिमा महको साथ गहिराइ हुन्छ र निम्बूको प्रयोगसँग सन्तुलित हुन्छ।
यो प्लेट कुनै पनि कठिनाई संकेत गर्दैन आफ्नै ओभन नियन्त्रण भन्दा बाहिर। किनकि ओभन एक समान हुँदैन र उही चीज जुन हाम्रो लागि काम गर्दछ त्यसले उही तरीकाले तपाईंको लागि काम नगर्न सक्छ। समय निर्धारित गर्दा यसलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। समस्याबाट बच्न मिनेट from० बाट हेर्नुहोस्।
१ कुखुरा ग्रिलको लागि तयार छ
१ प्याज, बाक्लो जुलियन
२ मीठो आलु
१/२ चम्मच सुक्खा थाइम
१/२ चम्मच ताजा जमीन कालो मिर्च
२ ठूलो चम्चा अतिरिक्त कुमारी अलिभ तेल
ओभन प्रि-गर्मी गर्नुहोस् २००ºC मा
कुखुरा राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् र यसलाई बेकिंग शीटमा राख्नुहोस्।
प्याज वरपर राख्नुहोस् र ठूलो टुक्रा मा मिठो आलु।
एक कचौरा मा मिक्स जैतुनको तेल थाइमको साथ, मरिच र नुनको रसको एक स्प्लासको साथ नुन।
दुबै कुखुरा र अन्य सामग्रीहरू यस मिश्रणसँग राम्ररी स्मर गर्नुहोस्, आफ्ना हातहरू फोहोर बनाउनुहोस्!
पछि तीन भागमा कागती काट्नुहोस्। टुक्राहरूमध्ये एउटा कुखुरामा डुबाउनुहोस् र बाँकी दुई प्यानमा राख्नुहोस्।
190ºC मा बेक गर्नुहोस् -०-40० मिनेट को लागी।
पछि घुमाउ, ट्रेलाई एल्युमिनियम फोइलले कभर गर्नुहोस् र अर्को १ another मिनेटमा बेक गर्नुहोस्।
अन्ततः, महले कुखुरालाई रंग्नुहोस्, प्रारम्भिक स्थितिमा राख्नुहोस्, तापक्रम बढाउनुहोस् र तपाईंले चाहनुभएको टोस्ट प्राप्त नगरेसम्म केही थप मिनेटहरू बेक गर्नुहोस्।
ओभनबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, केही मिनेटसम्म आराम गर्न दिनुहोस् र भुटेको कुखुराको मीठो आलु, थाइम र तातो महको साथ सेवा गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » CARNES » मिठो आलु, थाइम र महको साथ पोष्ट भुसुना
घर मा चाँदी सफा गर्न तरिकाहरू, नोट लिनुहोस्!
Postcoital dysphoria के हो?